Ii-FAQs - Shandong Lu oomatshini abancinci Co, Ltd
1.Ukufumana njani ixabiso lomatshini we-CNC lathe, umatshini wokugaya i-cnc, iziko lomatshini we-cnc nkqo, i-lathe yesandla ngokukhawuleza?
Ngokwesiqhelo siya kuncoma imodeli elungileyo (umatshini wentsimbi ye-cnc, umatshini wokugaya i-cnc, i-lathe yesandla, iziko lomatshini we-cnc nkqo, umatshini wohlobo lwe-cnc lathe, umatshini we-sliding cnc lathe) ngokomzobo wakho okanye imifanekiso, siya kukunika esona sisombululo sisiso, Ixabiso eliphantsi kunye nomgangatho ophezulu.
2. Ngaba kunzima ukufaka umatshini wentsimbi ye-cnc, umatshini wokugaya i-cnc, uhlobo lomatshini wase-swiss cnc lathe? Ufaka njani umatshini?
Faka umatshini (cnc lathe umatshini, cnc umshini wokugaya, lathe manual, cnc nkqo iziko umatshini, uhlobo swiss umatshini cnc lathe, umandlalo slant umatshini cnc lathe) kulula. Umatshini unokudityaniswa kakuhle kwaye xa ufumana umatshini, kufuneka ulungise inqanaba ulongeze ioyile. Ukuba awuyazi ukuba uyifaka njani siza kwenza ividiyo kuwe.
3. Liliphi ixesha lewaranti yomatshini?
Unyaka omnye kumatshini wonke (umatshini we-cnc lathe, umatshini wokugaya i-cnc, i-lathe yesandla, iziko lomatshini we-cnc nkqo, umatshini wohlobo lwe-cnc lathe, umatshini we-cnc lathe lathe), ngelixesha ukuba kukho naziphi na izinto ezonakalisiweyo siya kubonelela ngazo iindawo simahla.
4. Ngaba inkonzo yaphesheya ivumelekile?
Ngokuqinisekileyo. Ukuba umatshini (cnc lathe umatshini, cnc umshini wokugaya, lathe manual, cnc nkqo iziko umatshini, uhlobo swiss umatshini cnc lathe, umandlalo slant umatshini cnc lathe) kufuneka inkonzo oversea. Injineli yethu inokubonelela ngenkonzo yaphesheya ikwimeko yesiqhelo (i-Force Majeure ngaphandle). Iinkcukacha ngolwazi onokunxibelelana nathi simahla.
5. Liliphi ixesha lokuhlawula?
Intlawulo umatshini wethu (cnc lathe umatshini, cnc umshini wokugaya, lathe manual, iziko cnc nkqo umatshini, uhlobo swiss umatshini cnc lathe, umandlalo slant umatshini cnc lathe) yi-30% T / T njengediphozithi, intsalela kufuneka ihlawulwe phambi kokuba zithunyelwe . Samkela uL / ​​C, T / T, Western Union, D / P, D / A kunye neMoneyGram njl.
6. Ngaba umatshini ungenziwa ngemfuneko?
Ngokuqinisekileyo, sinako ukuvelisa umatshini elicwangcisiweyo ngokweemfuno zakho iinkcukacha. Bandakanya ukufaka izixhobo zokusebenza, i-turret ephilayo, i-VDI turret yomatshini we-cnc lathe. Faka i-4 axis, i-axis yesi-5, indlela ekhokelayo yomatshini wethu wokugaya i-cnc.